कथा Archives - Majdoor Online
सपना – इस्माली
September 13, 2017	Flash News, कथा, फोटो, साहित्य
लेखकको वैयक्तिक विवरण साहित्यिक नामः इस्माली (बाल साहित्यःमहेश पौडेल , ) जन्मः २०१२ जेठ ४, वतनःऔरही ४ ,महोत्तरी, जनकपुर अञ्चल, हालः पुष्पनगर,नयाँ बानेश्वर,काठमाडौँ, कामपा १० , मातापिताः तिलकुमारी देवी,गोविन्द प्रसाद पौडेल शिक्षा ः स्नातकोत्तर (गणित शिक्षा), पेशाःप्राध्यापन पहिलो रचनाः ऋणको थिचो (कथा),भञ्ज्याङ,२०३१ , प्रकाशित कृतिः सेतो आतङ्क ,२०३९,उपन्यास , जिरोमाइल,२०५६,उपन्यास, दुर्धर्ष , उपन्यास,२०७३ अनुवादः अक्लान्त कौरव ,उपन्यास,महाश्वेता देवी (बङ्गाली ...	Read More »
कथाः धृतराष्ट्र – इस्माली
February 10, 2017	Flash News, कथा, फोटो, साहित्य
उसलाई उनीहरुबाट तिनीहरुले अलग्याएर अर्को कोठामा लगे । कमाण्डोजस्तो देखिनेले कठोर स्वरमा सोध्यो, “ह्याँ किन ल्या तेरो बाउलाई ?” “सापले भन्या साप ! ”भन्दै उसलाई त्यहाँ ल्याउने जवानले भुइँमा ढ्याम्म खुट्टा बजार्दै कमाण्डोलाई सलाम ठोक्यो । कमाण्डोको बोली र हेराइले उसलाई फेरि पनि उत्तेजित पारिसकेथ्यो । उच्च चापको शिकार त उ छँदै थियो ,बेकाइदा र बेथिति सहन नसक्ने उसको पुरानो ...	Read More »
कामरेड घाम र कमरेड ज्योति – इस्माली
January 13, 2017	Flash News, कथा, फोटो
कथा पार्टीमा कामरेड घाम र कमरेड ज्योति भनेपछि कार्यकर्ताहरू हुरुक्कै हुन्थे । तिनलाई कोही माक्र्स र एङ्गेल्स भन्थे त कोही लेनिन र स्तालिन भन्थे, कोही माओ र चाओ पनि भन्थे । हुन त ती दुई पार्टीका कुनै पदमा पनि थिएनन् , केन्द्रीय सल्लाहकार बाहेक तर सिद्धान्तकार र नीतिकार मानिन्थे । घाम संस्थापक थिए भने ज्योति पश्चप्रवेशी । तर दुबैमा अनौठो ...	Read More »
कथा: अपनत्व – इस्माली
November 12, 2016	Flash News, कथा, फोटो, साहित्य
“बिन्देसरजी ! ओ मधेसीजी !! ” पछाडिबाट आएको आवाज बिन्देसरको कानमा ठोक्कियो र फर्केर हे¥यो । भारती रहेछ , कमलेश । उसैलाई पछ्याउँदै आउँदै रहेछ । सडकबाटो लगभग सुनसानै थियो ,फाट्टफुट्ट मान्छेमात्र हिँडेका देखिन्थे ,त्यो पनि डराई डराई । कर्फ्यु लाग्दैखुल्दै गरेको थियो, अहिले दुई घण्टाका लागि खुलेको थियो । दशगजामा धर्ना थियो आन्दोलनकारी मधेसीहरूको । कफर््यु शुरु हुन्थ्यो । ...	Read More »
राष्ट्रसेवक – इस्माली
October 22, 2016	Flash News, कथा, फोटो, साहित्य
कथा सेतो कमिज,गाढा निलो पाइण्ट र गाढा निलो कोटमा ऊ झन चिटिक्क देखियो । गोरो वर्णमा कस्तो खुलेको । पाँचै हजारमा सेट तयार भयो । मोफसलमा भएर होला । यताबाट अढाई हजार उसले चोखै उबा¥यो । उब्रेको रकम अफिसलाई फिर्ता गरिदिऊँ कि भन्ने लाग्यो प्रेप्रपौ अर्थात् प्रेम प्रसाद पौडेल लाई । (कार्यालयमा प्रेमप्रसाद पौडेललाई छोटकरीमा प्रेप्रपौ भन्ने गर्दथे अरुहरु)। त्यसैले ...	Read More »
कमरेड पाताल – मातृका पोखरेल
July 18, 2015	Flash News, कथा, साहित्य
कथा शहरमा जाडो धेरै बढेको छ । केही दिनदेखि मन पनि अलि नै बढी चिसो भएको छ । बिहान यति अबेरसम्म सिरकमा गुजुल्टिएर बसिरहन मन पराउने मेरो स्वभाव नै होइन । आज त अलिक बढी जाडो पनि भयो । आफू हिंड्ने बाटो हिजोभन्दा बढी उवड–खावड र कष्टकर देख्न थालेको छु । आफ्नै अनुभूतिसँग आफैंलाई कहिलेकाहीं डर लाग्छ । मभन्दा अघिल्लो ...	Read More »
गणेश शर्माको उपन्यासः थुम्काबाट चियाउँदा -4
July 12, 2015	Flash News, कथा, साहित्य
भाग ४ नोखप्रसाद र भानु घर पुगे । ढोकामा ठूलो भोटे ताल्चा लागेको थियो र आँगनको छेउमा मालीगाई र तीखे गोरु बाँधेको थियो । उनीहरु आमुन्ने सामुन्ने परेकाले आपसमा सिङ ठोकाठोक गर्थे । पद्माको मृत्युदेखि नै ती पशुहरु पनि टुहुरा झैं देखिन्थे । फुर्सदको समय पाएमा पँधेराकी बुढीले घाँस पानी दिन्थिन् । अन्यथा कोदाको नल चपाएर आँगनमा बसिरहन्थे । वीचैमा ...	Read More »
गणेश शर्माको उपन्यास थुम्काबाट चियाउँदा -भाग ३
July 4, 2015	Flash News, कथा, साहित्य
भानुलाई शान्त पारेपछि सवै चेलाहरु मिलेर कोशीको किनारामा एउटा दरी ओछ्याए । अनि आफ्ना गुरुलाई लगेर त्यै छिपछिपे पानीमाथि ओछ्याएको दरीमा सुताए । अव रामचन्द्र बाजे उत्तर सिरान गरेर उत्तानो परेर सुते । उनले सुत्ता उपरखुट्टी लगाएका थिए अथवा दाहिने गोडा देव्रे गोडामाथि चढाएका थिए । अब अरु सबै चेलाहरु फर्किएर समीको चौतारामा गए । तर भाष्कर भने गुरुको नजिकै ...	Read More »
उपन्यास:थुम्काबाट चियाउँदा-2 -गणेश शर्मा
July 1, 2015	Flash News, कथा, साहित्य
भाग दुई रामचन्द्र बाजेको घरको दलान सानो थियो । सवै चेलाहरुको लागि बस्ने ठाउँ पुगेन । तसर्थ सवैजना एकैठाउँ बसेर कुरा गर्ने ठाउँको लागि घरमाथिको चहुरमा व्यवस्था मिलाए । यो छलफल गर्ने ठाउँ टाउके हायुको घरनिर थियो । छलफल गर्नको लागि नै मुखियाले छुट्याई दिएका थिए । त्यहाँ एउटा पिपलको रुख थियो । त्यो रुखको वरिपरि चौतारोको माझमा रामचन्द्र बाजे ...	Read More »
थुम्काबाट चियाउँदा – लेखक गणेश शर्मा
June 27, 2015	Flash News, कथा, यात्रा–संस्मरण
थुम्काबाट चियाउँदा -उपन्यास लेखक गणेश शर्मा समर्पण ः साहित्य प्रेमीहरुमा काभ्रेको खोरियालाई हुस्सेले ढाकेको थियो । त्यसकारण विजयछापका झुप्राहरु बादलभित्र हराएका थिए । थुम्काहरुले कालो बादलको टोपी लाएकाले वरिपरिका रुखहरु प्रष्ट देखिदैन थिए । भष्मे खपाँङ्गीको घरनेर तगारामा आकाश खसे झैं देखिन्थ्यो । पाखाभित्ताका खोल्साहरु छ्याङ छ्याङ गरेर बग्थे । ध्यान दिएर सुन्दा संंगीतको ध्वनि झैं सुनिन्थ्यो । गुराँस र ...	Read More »